စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲသူများတွင် ဦး နှောက် dopamine D2 receptors အနိမ့်အဆင့် - orbitofrontal cortex တွင်ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း (၂၀၀၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက် dopamine D2 receptors ၏အနိမ့်အဆင့်: အ orbitofrontal cortex (2001) တွင်ဇီဝြဖစ်တွေနဲ့အသင်းအဖွဲ့
နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001 Dec;158(12):2015-21.
Volkow ND, Chang က L ကို, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, ding YS, Sedler M က, Logan J ကို, Franceschi: D, Gatley J ကို, Hitzemann R ကို, Gifford တစ်ဦးက, Wong ကကို C, Pappas N ကို.
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန, Brookhaven အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်း, Upton, နယူးယော့ 11973, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အဆိုပါစွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် (ထိန်းချုပ်မှုနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏အရှုံး) တွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဘာသာရပ်များအတွက်တစ်ဦးကတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက် dopamine D2 receptors တစ်နိမ့်အဆင့်ပါ။ ကိုကင်းချိုးဖောက်မှုများ, D2 receptors ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ဟာ orbitofrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်တဲ့အနိမ့်အဆင့်ကိုသူနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex compulsive အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ကြောင့်၎င်း၏ပြတ်တောက်စွဲဘာသာရပ်များအတွက် compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ဒီလေ့လာမှုကအလားတူအသင်းအဖွဲ့စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိစူးစမ်း။
တဆယ်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် 20 Non-မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) နဲ့လေ့လာခဲ့ကြပြီး [11C] raclopride dopamine D2 receptors ၏ရရှိမှုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဒေသတွင်းဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အကဲဖြတ်ရန် [18F] fluorodeoxyglucose ၏အမှတ်အသားနှင့်အတူရန် ဦးနှောက် function ကို။
စိတ်ကြွဆေးအချိုးဖောက်ဆုံးနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များ (ထို putamen အတွက် caudate နှင့် 2% အတွက် 16% ၏ခြားနားချက်) ထက် D10 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုတစ်ခုသိသိသာသာနိမ့်အဆင့်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုချိုးဖောက်သည့် orbitofrontal cortex နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်မှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု၏အောက်ခြေအဆင့်ယခင်ကကင်းချိုးဖောက်မှုများ, အရက်သမားနှင့်သူရဲကောင်းချိုးဖောက်မှုများအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုကစိတ်ကြွဆေးချိုးဖေါက်မှုဒီတွေ့ရှိချက်ကိုတိုးချဲ့။ T ကကိုကင်းချိုးဖောက်မှုများယခင်တွေ့ရှိချက် replicates ထားတဲ့စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်သည့် orbitofrontal cortex အတွက် dopamine D2 receptors ၏အဆင့်နှင့်ဇီဝြဖစ်အကြားသူအသင်းအဖွဲ့, အ orbitofrontal cortex ၏ D2 အဲဒီ receptor-mediated dysregulation ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုများအတွက်ဘုံယန္တရားအခြေခံနိုင်ကြောင်းအကြံပြု မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဘာသာရပ်များအတွက်။